Ciidanka Booliska iyo sida ay amniga goobaha doorashada u sugayaan | Dhacdo
Home Wararka Maanta Ciidanka Booliska iyo sida ay amniga goobaha doorashada u sugayaan
Afhayeenka Ciidanka Booliska Somaliya, Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa sheegay in doorashadu tahay culeys kale oo ku yimid shaqadoodii maalinlaha ahayd ee la xiriirtay sugidda amniga.
Afhayeenka ayaa tilmaamay in ay ciidan gaar ah ugu talagaleen inay suggaan goobaha doorashooyinka, si aan loogu waxyeeloobin, leeskuna waxyeeleynin.
Isagoo VOA la hadlayay, waxna laga weydiiyay sida ay ugu diyaargaroobeen sugidda amniga goobaha doorashooyinka ayaa sheegay inaanay shaqadoodu ahayn sugidda amniga doorashooyinka oo keliya, balse ay habeen iyo maalin u taagan yihiin sugidda ammaanka ummadda Soomaaliyeed iyo hantidooduba.
“Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, keliya doorasho uma shaqeeyo maalin iyo habeen. Anaga waxaan qaadanay qaaciddo ama jadwal aan ku shaqayno oo 24/7 wax la yiraahdo ah, waa afar iyo labaatanka saac ee toddobada maalmood oo la shaqeynayo.” Ayuu yiri Afhayeenka.
Afhayeenka ayaa yiri “Anagu har iyo habeen waxaan u taaganahay sugidda ammaanka dadka iyo hantida ummadda Soomaaliyeed, ee goob walba ku sugan, haddii ay Magaalada Muqdisho noqon laheyd ama Kismaayo, Baydhabo, Jowhar, Beledweyne, Gaalkacyo ama meel kastoo ay tahayba.”
Waxa kaloo uu yiri “Askariga booliska ah ee taagan muhiimadiisu waa sugidda ammaanka. Anaga maalin kasta ayayba noo tahay maalin ammaan, subax kasta ayay noo tahay maalin ammaanka la sugo. Subax kasta markaan soo kaco raadkii xalay muxuu ahaa, xalay saldhigga maxaa soo galay, maxaa afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyay ee kaga duwan tahay dhacdadan, shaqadaynu amniga oo keliya ayay tahay.”
Cabdifitaax Aadan Xasan, Afhayeenka Ciidanka Booliska ayaa yiri “Haddii ay doorasho timid culeys waxaa imaanayo keliya xaruntaas ciidan kale hala sii geeyo, ciidankii ayaa soo badinaa oo xaruntaasaa la geeyaa, laakiin nolosha iyo sida uu u soconayo ammaanka waxay ka mid noqotay nolol maalmeedka aan leenahay, doorashadana waa qayb ku soo korortay. Keliya ciidan qaas ahaa u samaynaa oo ilaaliya goobtaas ay doorashada ka dhaceyso, ayadana waxaan ka fekernaa inaanan lagu waxyeeloobin, leeskuna waxyeeleyn gudaheeda. Har iyo habeen waxaan u taaganahay sugidda ammaanka ummadda Soomaaliyeed.”
Doorashada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka oo bishii November dalka ka bilaabatay ayaa ka dhaceysa Magaalada Muqdisho iyo min laba magaalo oo ka tirsan Dowlad Goboleedyada, inkastoo qaarkood aysan weli ka bilaabin.
Previous articleWasiirka Arrimaha Dibadda oo qaabilay Adam Abdelmoula (SAWIRRO)
Next articleRooble oo Safiirka Emirate-ka kala hadlay xiriirka labada dal (SAWIRRO)